गुल्मीमा भेटियो नेपालकै महँगो काठ, १ किलोकै पर्छ ३० लाखभन्दा बढी, यसरि बेच्नुस र लाखौ कमाउनुस (भिडियो) – Tufan Media News
गुल्मीमा भेटियो नेपालकै महँगो काठ, १ किलोकै पर्छ ३० लाखभन्दा बढी, यसरि बेच्नुस र लाखौ कमाउनुस (भिडियो)
२३ आश्विन २०७६, बिहीबार ०८:३२
गुल्मी । हामीले कहिले सोचेका छौ कि कुनै एउटा सामान्य काठको यति धेरै मूल्य पर्न सक्छ भनेर ? तर अब सोच्न पर्ने बेला आएको छ कि हाम्रै नेपालमा पनि यति धेरै मूल्यको काठ हाम्रै वरिपरि छ । त्यो पनि गुल्मी जिल्लाको सत्यवतीमा । गुल्मीको सत्यवतीमा यस्तो काठ छ जस्को बजार मूल्य ३० लाख भन्दा बढी पर्छ भन्दा तपाईलाईअचम्म पनि लाग्न सक्छ ।
तर यो कुरा साचो हो । यति धेरै मह“गो पर्ने काठ के कामको लागि प्रयोग हुन्छ होला भन्ने कुरा तपाईको दिमागमा घुमिरहेको हुनुपर्छ । यस्को प्रयोग पनि यस्को मूल्य बराबर किन्ती या भनौ मह“गै छ । थाईल्याण्डबाट बिउ लिएर नेपालको गुल्मी जिल्लामा खेती गरिरहेको यो परिबार हो भार्से गुल्मीको मगर परिबार ।
जहा“ यस्को खेतीले गाउनै छक्क र खुशी छ । यो काठको नाम हो अबरोड । जस्को बिउ नेपालमा पाइदैन थाईल्याण्डबाट मगाउनपर्छ, हेरौ यो भिडियो खासमा यो काठको काम के हो त ? किन यति धेरै मह“गो छ र यस्लाई बिशेषगरि के मा प्रयोग गरिन्छ ?
टिकटक बाट चर्चामा आएकि